Kay oo ka hadlay arrinta Kismaayo - BBC Somali
Kay oo ka hadlay arrinta Kismaayo
20 Jannaayo 2014
Image caption Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Kay
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa maanta soo dhaweeyay aasaaska golaha fulinta ee maamulka KMG ah ee Jubba. Laakiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka dhan laga wada qaybgaliyo.
Hadal qoraal ah oo laga soo saaray xafiiska wakiilka ayaa loogu hambalyeeyay hoggaamiyaha maamulkaasi KMG ah Axmed Maxamed Madoobe caleemo saarka loo sameeyay maanta.
Laakiin waxa hadalkan ka soo baxay xafiiska Nicholas Kay hoosta looga xariiqay baahida in maamulka uu metelo dhammaan dadka saddexdaasi gobol, oo weliba si gaar ah loo eego ka qaybgalka haweenka.
Waxa uu ku ammaanay maamulka ka go'naanshaha dhaqangelinta heshiiskii Addis Abab ee bishii July 2013.